Dooxada Qorraxda iyo Jasiiradda Baaskiilka La Aasaasay | RayHaber | raillynews
HometareenkaDooxada Sunflower iyo Foundation Foundation ee Baaskiilada la Bilaabay
Dooxada Sunflower iyo Foundation Foundation ee Baaskiilada la Bilaabay
06 / 03 / 2018 tareenka, GUUD, TURKEY
Gabbaldayaha Valley iyo xaflad groundbreaking Bike Island ee Toçoğlu Madaxweynaha, "In dunida, magaalooyin badan dalka Turkiga, waxaa lagu qasbay in ay baraaraan kharash ku qurux dabiici ah. Waxaan; Kama ekaan doonno magaalooyinka kale, looma bedali doono magaalooyin dayax gacmeedyo la mid ah.
Xafladda aas-aasiga ah ee Sunflower Valley iyo Baaskiilka Mashruuca Baaskiil ee ay ku guuleysan doonaan Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya ee Yenikent ayaa la qabtay. Guddoomiyaha gobolka Irfan Balkanlıoğlu xafladda, Duqa magaalada Zeki Toçoğlu, Kuxigeenka AK Party Ayhan Sefer Üstün, Xoghayaha Guud İbrahim Pehlivan, Maareeyaha Guud ee SASKİ. Rüstem Keleş, gudoomiyeyaasha degmooyinka xisbiga AK Party, badhasaabyada degmooyinka, kuxigeenka xoghayaha guud Ayhan Kardan, Ali Oktar, Zafer Poyraz, agaasimaha caafimaadka gobolka Assoc. Dr. Aziz Öğütlü, Agaasimaha Gobolka ee Adeegyada Dhalinyarada iyo Isboortiga Fatih ikelikel, Khabiirada UCI Thomas Alier, ASKF Madaxweynaha Yaşar Zımba, muhtars, metropolitan iyo xafiisyada SASKI xafiisyada shacabka ayaa kaqeyb qaatay muwaadiniinta ku nool gobolka.
170 acres oo dhul ah
Mutlu Maanta waa maalin noo gaar ah annaga iyo dadkayaga walaalaha ah ee ku nool gobolka. 170 waxay noqon doontaa barta kulan ee cusub ee wada-hawlgalayaasha waddankeenna. Mashruucayaga Baaskiillada ayaa martigelin doona International Mountain Bike Marathon Championship ee 2020. Mashruucayagu waxaa ka mid noqon doona adduunka baaskiil wadista, xafiisyada iibka, VIP Salon, velodrome iyo jidadka baaskiil wadooyinka. Marka lagu daro wadada '4,5 km', jaranjarada kunka qof, goobta daawadayaasha 2, barkadda iyo kafateeriyada ku xigta waxay siin doonaan marti sharaf aad u wanaagsan martidayada. Nasiib wacan
Yenikent waa mustaqbalka Sakarya
Duqa magaalada Zeki Toçoğlu ayaa yiri, iz Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan isugu nimaadno xaflada sagxaddeena ah ee Mashruuca Sunflower Valley iyo Baaskiilka Baaskiilka. Magaaladeenu maalinba maalinba maalinta ka dambaysa way sii kordhayaan oo horumarayaan. Annagu, haddaan nahay magaalo-madax, waxaan si joogto ah ugu shaqeyneynaa habeen iyo maalinba si aan Sakarya uga dhigno mid aan ku noolaano. Sakarya waa magaalada mustaqbalka, Yenikent waa mustaqbalka Sakarya. Waad ku mahadsan tahay wanaag, gobolkeenna Yenikent waa maalinba maalinba maalinta ka dambeysa sii kordheysa una sii raaxeysan doona. Waxaan ka fulinay mashaariic badan Yenikent. Waxaan helnay aagag xoojinta bulshada. Waxaan ka dhignay dhismayaasha cufan inay shaqeeyaan. Yenikent si dhakhso ah ayey ugu dhaqaaqaysaa inay noqoto degmo jaamacadeed. Maanta waxaan garowsaneynaa maalgashi kale oo qiimo iyo muhiimad ugu dari doona Sakarya iyo Yenikent. ”
Sakarya waa magaalo cagaaran
Madaxweynaha Toçoğlu, "Magaalooyin badan ee dunida iyo Turkey, waxaa lagu qasbay in ay baraaraan kharash ku qurux dabiici ah. Waxaan isku dayeynaa inaan badalno magaaladeena anagoo ilaalinayna quruxdeena dabiiciga ah. Sakarya waa magaalo cagaaran oo waxay u horumarin doontaa sidii magaalo cagaaran. Annaga oo ah magaalo-weynta, waanu ka warqabnaa waxa aannu qabanno. Uma ekaan doonno magaalooyinka kale, uma tusaale qaadan doonno tusaale ahaan, uma noqon doonno magaalooyin dayax gacmeedyo la mid ah. Taa baddalkeeda, Sakarya waxay noqon doontaa magaalo lagu daydo oo leh qaab dhismeedka, meelaha lagu noolaado iyo qurxinta dabiiciga ah. Ixtiraamka aadamiga, dabeecadda iyo dhammaan waxyaabaha nool waxay xuddun u yihiin magaalooyinkeenna. Uma nixin doonno carruurteenna dabeecadda, cirka. Cagaar iyo buluug; qaab dhismeedka jawi saaxiibtinimo leh; leh dareen xoogan oo bulsheed; Dhaqan ahaan dhaqankeeda, Sakarya wuxuu noqon doonaa mid sii noolaada maalin kasta. Iyada oo ay sabab u tahay fahamkan, ka sokow mashruucan aan maanta aasaaska u dhigi doono, waxaan magaalooyinkeenna u galnay mashaariic badan oo qiimo badan waanan sii wadaynaa inaan sidaas samayno. ”
Meelaha ku nool magaalada
Waxaan keenay magaalada Sakarya wabiga magaalada waxaana u soo bandhignay Sakaryapark adeegga shacabkayaga. Waxaan keennay Korucukpark iyo Yenikentpark gobolkayaga Yenikent. Waxaan dhisnay garoon wax ku kordhinaya muhiimadda degmada Ferizli. Waxaan ku dhameysanay Esentepe Park ee Pamukova. Waxaan dhammeystiri doonnaa Maltepe Park, oo noqon doonta middii ugu horreysay oo magaaladeena la yeelata Watch Tower, oo u sahleysa inay u diyaariso muwaadiniinteena. Mashaariic kala duwan ayaa ka socda degmooyinka Hendek iyo Arifiye. ”
Cinwaanka cusub ee waqtiyada wanaagsan
Mashruucayaga Sunflower Valley iyo Baaskiillada Jasiiradda, oo aan aasaaska u dhisi doonno maanta, ayaa loo adeegsan doonaa u adeegidda dadkeenna waqti aad u yar. Waxaan u rogi aag dooxada halkaas oo qoysasku waqti ku qaadan karaan nabad, dadka ka socda qaybaha kala duwan ee nolosha waxay ku sameyn karaan isboorti, qurxinta dabiiciga ah. Mashruuca Sunflower Valley iyo Baaskiilka Baaskiilka, oo aan ka hirgalin doonno dhul heersare ah oo loo yaqaan '170 acres', waxay hadiyad u noqon doontaa nolosha bulshada ee magaaladeenna waxayna noqon doontaa cinwaan cusub oo waqtiyo wanaagsan lagu qaatay. Our mashruuca; mashruuc adag oo ay ka mid yihiin garoomada ciyaarta ee carruurta, jimicsiga, baashalka iyo meelaha lagu lugeeyo ee dadka waaweyn, kafateeriyada, balliyo iyo baarkinno loogu talagalay gawaarida 150 iyo xarumaha bulshada ee hodanka ah.
Marti qaali ah
Yen Mashruuca Baaskiilada Baaskiilka, Yenikent waxaa lagu xusi doonaa baaskiil. Sakarya waa magaalo caan ku ah ciyaaraha. Magaala-weyn ahaan, waxaan u aragnaa isboortiga qayb ka mid ah nolosha oo aan sii wadno maalgashiga kala-jaadnimada iyo faafinta isboortiga. Waxaan u dhisnaa dhismeyaal isboorti, waxaan tababbaranaa ciyaartooy kasta qayb kasta oo isboorti ah, waxaan dhisi doonnaa wadiiqooyin baaskiil waxaanan balaarineynaa qaybaha isboortiga ee magaaladeena. Jasiiradda Baaskiil, oo aan aasaaska u dhisi doonno maanta, waxay sidoo kale martigelin doontaa International Mountain Bike Marathon World Championship, kaas oo lagu qaban doono magaaladeena iyada oo la tixraacayo Madaxweynaheena 2020. Baaskiilada Baaskiilku waxay siin doonaan fursad marti ah oo cajiib ah dhammaan martida imaanaysa magaaladeena
Yenikent horumar dheeri ah ayuu sameyn doonaa
Xubin ka tirsan baarlamaanka Üstün ayaa yiri, ham Mahad Eebaa iskaleh, markii Mehmetçik uu ciwaan ka qoray Afrin; astaamo kale ayaa laga qorayaa wadankeena. Waxay sii wadaan in ay u adeegaan sida Turkey waa in ay adag. Yenikent wuxuu horumarin doonaa sanadaha soo socda. 3. Buundada Bosphorus ayaa halkan mari doonta. Goobta acreage-ka '1000 acisage' ee cusbitaalka '400-sariirta' ayaa la sii dhigay. Mashruuc maxkamadeed oo heer sare ah ayaa laga soosaaraa Yeniket. Dhinac ahaan, waddankeenna iyo degmooyinka waxay sii wadaan shaqadooda. Mashruuc kale oo aad u weyn ayaa la fulinayaa. Waxaan ka saxiixi doonnaa urur caalami ah 2020. Waxaan sii wadi doonnaa u shaqeynta dowladdayada, ku xigeennada, gudoomiyaha gobolka, NGO-yada, mukhtars iyo Sakarya. ”
Waxay siisaa sharaf iyo isla weyni
Gudoomiyaha Balkanlıoğlu, “dhaqaalaha Sakarya, beeraha iyo dalxiiska waa mid kamid ah gobalada muhiimka ah ee koboca iyo horumarka. 7 dhoofinta. Waxaan falan. Waxa kale oo jira horumarro waaweyn oo xagga dareenka beeraha ah. Qaar badan oo ka mid ah wax soo saarka beeraha ayaa ku koray magaaladeenna. Dhirta quruxda badan ee laga soo dhoofiyo dalka dibedda ayaa hadda laga keenay halkan. Sakarya aad ayey u fiicnaan doontaa mustaqbalka. Badhasaabyadeenu waxay qabtaan hawlo badan. Sakarya aad ayuu uga sii horreeyaa warshadaha. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maanta halkan u joogo aasaaskii adeeg aad u wanaagsan. Xaruntani waxay na siinaysaa sharaf iyo sharaf. Waxaan martigelin doonnaa tartan muhiim ah, Tartanka Kubbadda Cagta Adduunka oo aan ka helayno Madaxweynahayaga. Waxaan kale oo abaabulaynaa xaflad sagootin ah oo ah mashruuc nolosha u horseedaya xaafaddan iyo gobolkaba tasiilaheedii bulshada. Waxaan jeclaan lahaa inay horeba u noqoto mid xariif ah oo xariif ah.
Dhagaxyada Dhamaadka ee Dooxada Sunflower iyo Baaskiilada Baaskiilka
Dooxada Sunflower iyo Baaskiilada Baaskiilku Fiican
Riyooyin ah Dooxada Sunflower iyo Jasiiradda Cycling
Country Sports oo leh Dooxada Sunflower iyo Island of Bicycle
Sunflower Dooxada Baaskiilka waa wax aad u wanaagsan Sakarya
Adeega Baaskiiladda Dooxa Bayniska 7 / 24 Adeega
Baaskiilada Dooxa Baaskiilku wuxuu noqon doonaa Cinwaanka Cayaaraha 2019
Hawlaha Muhiimka ah ee Dooxada Baaskiilka
Darawaliinta Nabdoon ee Dooxada Baaskiiladaha
Madaxweynuhu wuxuu noqonayaa marti-geliyaha rasmiga ah ee Imaaradda cusub ee Istanbul